သဲအဝတ်လျှော် - တန်ဇန်းနီးယားနယ်
ကနေဆောင်းပါး: သဲအဝတ်လျှော် | | အချိန်: ဧပြီလ 2013 | tag ကို: သဲအဝတ်လျှော်
Xuanshi လိမ်သဲအဝတ်လျှော်စက်သတ္တုဗေဒ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ရေနှင့်လျှပ်စစ်ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းသဲအဝတ်လျှော်စက်ကိရိယာများအတွက်စစ်ဆင်ရေး delete အဝတ်လျှော်, ရေနုတ်မြောင်း, ခွဲခြားနှင့်ညစ်ညူးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ငွေမှုန်အရွယ်အစားနှင့်ကြမ်းအသေးစိတ်မှုပစ္စည်းအဝတ်လျှော်များအတွက်သင့်လျော်သော။ သောကြောင့်အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်၎င်း၏သည်ဤလက္ခဏာများ၏ကျယ်ပြန့်ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်သဲအဝတ်လျှော်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ: 1 ။ ရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ, အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းရေး, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု။2။ အတော်များများကမော်ဒယ်များ ... ဆက်ဖတ်ရန်...
Xuanshi ဘီးသဲအဝတ်လျှော်နေတဲ့သဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသဘာဝသဲအဝတ်လျှော်စစ်ဆင်ရေးမရှိမဖြစ်အပိုင်းအစများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်အဆောက်အဦး, စုစုပေါင်းအပင်များ, ဖန်စက်ရုံ, ပါဝါဘူတာရုံ, ကွန်ကရစ်ရေကာတာနဲ့တခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေး, ခွဲခြား, ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်စနစ်အားသဲစက်မှုလုပ်ငန်း၏အခြားမျိုး၌ ပို. ပို. အသုံးစေရန်စသည်တို့ကိုစင်ကြယ်သော, မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်း၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းမြန်နှုန်းသန့်ရှင်းရေး, သဲ၏ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်း, သေးငယ်သည်။ ဘီးသဲအဝတ်လျှော်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်...
နိဒါန်း: ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသကဲ့သို့, ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆောက်လုပ်ထားခံရဖို့ ပို. ပို. အဆောက်အဦးများရှိလိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းတဲ့သဲအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အကြီးအအခန်းကဏ္ဍမရှိသံသယဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်သောသဲရရှိရန်မည်သို့ကုန်သည်များအတွက် key ကိုအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖို့လက္ကားသဲအဝတ်လျှော်စက်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ XSD စီးရီး၏ထိရောက်သောသဲအဝတ်လျှော်စက်ကိုပု ba အပေါ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသဲနှင့် slag လုံးလေးများများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် level ကို၏သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်...
စက်နိဒါန်းလျှော် LXS စီးရီးသဲသဲအဝတ်လျှော်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်အလုပ် site ကိုနှင့်ကွန်ကရစ်ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း, သဲအပြောင်းအလဲနဲ့, လျှပ်စစ်တိုင်စက်ရုံတွင်အသုံးပြုသည်, အမျိုးမျိုးသောသဲခွဲခြားနှင့် dewatering ဝက်အူ။ ဒါကသဲအဝတ်လျှော်သုံး weir ပြားအနည်အနှစ်များရေကူးကန်ဖွဲ့စည်းရန်, ထိုဝက်အူခေါင်းကိုဒီရေကူးကန်ထဲမှာစွဲလန်းနှစ်သက်သည်ရေစည်ပိုင်းအောက်တွင်သည်, ဝက်အူကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လှည်လျှော့ချမှတဆင့်လျှပ်စစ်မော်တာအားဖြင့်မောင်းနှင်သည် 15 ၏အကွံချမှတ်သည်လတ်ဆတ်တဲ့ရေစိမ်ပန်းကန်ထဲကနေအစာကျွေးနေသည် sedi ၏အောက်ခြေတွင် ... ဆက်ဖတ်ရန်...
သဲလျှော်စက်နိဒါန်းတဲ့ professional သဲအဝတ်လျှော်စက်ကိုထောက်ပံ့သည်။ XSD စီးရီးသဲအဝတ်လျှော်စက်ကိုသဲနှင့် slag လုံးလေးများများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် level ကိုနည်းပညာနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများသန့်ရှင်းရေးတစ်မျိုးကြောင့်ထုတ်ကုန်၏တူညီသောမျိုးနိုင်ငံခြားထူးချွန်နည်းပညာမိတ်ဆက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သဲအဝတ်လျှော်စက်ကိုကျယ်ပြန့်သည်အောက်ပါလုပ်ငန်းများတွင်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုသည်: ကျောက်မိုင်း, တွင်းထွက်ပစ္စည်း, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ရေ conser ... ဆက်ဖတ်ရန်...